Tanànan'i Soria, zava-mahatalanjona any Espaina tsy misy mponina | Vaovao momba ny dia
Ny tanànan'i Soria dia an'ny antsoina hoe "Espana lany andro" saingy tsy very ny fitarainany noho izany. Raha ny marina, ny sasany amin'ireo tanàna ireo dia anisan'ny tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenentsika ary mendrika anao izy ireo hitsidika azy ireo.
Ireo dia tanàna misy ala mahafinaritra toy ny Medinaceli, sehatry ny ady angano toa Calatañazor na miorina amin'ny tontolo voajanahary tsy azo tanterahina izay manohitra ny hery misintona toy ny Rello. Ny hatsaran-tarehiny sy ny hakanton'ireo tsangambato no tena manintona anao atolotry ny tanànan'i Soria anao. Raha te hahalala azy ireo ianao dia mamporisika anao hamaky hatrany.
1 Vohitra Soria, dia niverina tany taloha
1.2 Calatañazor, ady angano
1.3 Berlanga de Duero, tontolo voajanahary mahafinaritra
1.4 Medinaceli, firavaka iray hafa ao amin'ny tanànan'i Soria
1.5 Rello, toerana tsy azo atao
1.6 Yanguas, fahagagana eo amin'ireo tanànan'ny Soria
Vohitra Soria, dia niverina tany taloha
Lova be dia be no misy ny tanànan'ny Soria ny fitsidihana azy ireo dia toy ny dia lavitra. Tsy afaka mampiseho anao rehetra izahay amin'ny lahatsoratra iray. Fa matokia fa ireo izay ho hitantsika dia manana ny azy manokana amin'ireo tsara tarehy indrindra ao amin'ny faritanin'i Soria.
Tanàna Episkopaly taloha ary Toerana kanto manan-tantara Nanomboka tamin'ny 1993, Burgo de Osma dia manolotra anao tsara tarehy Majistra Plaza Taonjato faha-XNUMX. Fa tsy maintsy mitsidika ny mahavariana ihany koa ianao Katedraly Saint Mary of the Assuming, miaraka amin'ny vavahady Gothic manaitra. Kanto ihany koa ny Hopitaly taloha an'i San Agustín, izay mamerina ny maodely an'ny Alcázares de los Austrias.
Hopitaly taloha an'i San Agustín
Etsy ankilany, University of Santa Catalina Trano Plateresque tsara tarehy izay navadika ho hotely izao. Ary, eny an-tsisin'ny tanàna dia misy ny sisa tavela a lapan'ny izay manjaka ny faritra avy amin'ny tilikambo fiambenana. ny fiangonan'i Santa Cristina Trano Romanesque tsara tarehy izy ary Seminera Santo Domingo de Guzmán dia asa neoclassical noho ny Francesco Sabatini.
Fa iray amin'ireo tandindon'ny Burgo de Osma dia ny Loharano gidro, izay azonao aleha amin'ny arabe arabe izay mandrafitra ny trano misy maritrano malaza. Ary ny villa koa dia manana Tetezana romana amin'ny ony Ucero. Farany, ity tanàna ity dia ao anatin'ny làlan'ny Làlan'ny Cid, manokana ny fizarana natao batemy ho 'El Desierro'.
Calatañazor, ady angano
Ny tanàna kelin'i Calatañazor dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Soria, saingy izy io dia manana ny lazany amin'ny ady angano, izay, hoy ny fitenenana, "Very ny amponga i Almanzor". Na dia tsy misy azo antoka aza fa nisy ny ady teo amin'ny tafiky ny silamo sy ny an'ny Sancho García, toa azo antoka fa nandositra i Almanzor ary maty tao amin'ny tanàna akaiky an'i Medinaceli, izay horesahintsika avy eo.
Anecdotes ankoatr'izay, Calatañazor dia manana lova mahafinaritra be dia be. ny lapan'ny, tsy voatahiry tsara sy tafaverina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Fa, ambonin'izany rehetra izany, azy ireo manokana tranon'ny tanàna, amin'ny fananganana medieval ary miorina amin'ny arabe mifamezivezy. Manoro hevitra anao koa izahay mba hahita an'ity tanàna ity mangatsiaka amin'ny fotoana fiangonana any San Juan sy Nuestra Señora del Castillo.
Fa i Calatañazor dia mitovy laza amin'izany Sabinar, ala juniper mahavariana izay mahaforona iray amin'ireo tahiry voajanahary lehibe ao amin'ny faritanin'i Soria.
Berlanga de Duero, tontolo voajanahary mahafinaritra
Berlanga koa dia manana habaka voajanahary mahavariana. Momba ny Altos de Barahona tany karakaina misy vatolampy misy alikaola ary misy karazana endemika efa nambara Toerana mahaliana ny fiaraha-monina y Fiarovana manokana ho an'ny vorona.
Miaraka amin'ity fahagagana voajanahary ity, Berlanga de Duero dia manolotra anao mahatalanjona lapan'ny tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny rindriny. Ary afaka mitsidika ilay tsara tarehy tsy dia kely koa ianao Fiangonana Collegiate any Santa María del Mercado, an'ny faktiora Renaissance na dia ny alitara an'ny Alitara Main aza dia Churrigueresque; ny Lapan'ny Marquis of Berlanga, Renaissance mitovy; ny Biara Paredes Albas ary ny Taranaky ny vadin'olon-tokana.
Medinaceli, firavaka iray hafa ao amin'ny tanànan'i Soria
Amin'ny fitsidihanay ny tanànan'i Soria, dia tonga tao Medinaceli izahay, izay manambatra ny lova goavambe sy ny habaka voajanahary manaitra. Ity firavaka marina ity dia misy sisa tavela Romanina toy ny andohalambo telo ary ny mozika ao amin'ny Kianja St. Peter.
Fa misy koa sarobidy io Majistra Plaza miaraka amin'ny Lapan'i Ducal Fomba Renaissance ary Alhóndiga Taonjato faha-XNUMX. Ilay mahatalanjona Fiangonana Collegiate any Santa María de la Asunción, ny sisa tavela a lapan'ny ary ny masera masin'i Santa Isabel.
Ary koa, eo amin'ny manodidina an'i Medinaceli no Tany lao Layna, Izay koa Toerana mahaliana ny fiaraha-monina y Fiarovana manokana ho an'ny vorona. Saingy, ankoatr'izay, amin'ity morontsiraka ity dia ny tranokala paleontological an'ny Havoanan'i Pelado, natokana ho an'ny Pliocene Ambany.
Rello, toerana tsy azo atao
Ity tanàna ity dia tsy dia malaza loatra toy ny teo aloha, saingy mbola mendrika hitsidika azy io. Dia a tanàna medieval misy rindrina izay eo an-tampon'ny vatolampy. Izany rehetra izany dia tsangambato. Raha ny marina dia mitazona ny anaram-boninahitr'i Fananana tombotsoan'ny kolotsaina. Saingy manasongadina ny fiangonan'ny Lady's of the Assuming, la Hermiteran'i Las Angustias ary ny Tilikambo Tiñón, tilikambo fiambenana tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay niambina ny lalana namaky ny Ony Duero.
Yanguas, fahagagana eo amin'ireo tanànan'ny Soria
Na dia tsy dia fahita firy noho ilay teo aloha tao amin'ny fizaran-tany fizahan-tany aza dia Yanguas, izay mahagaga ihany anefa. Voahodidin'ny habaka voajanaharin'ny Banky amin'ny renirano Cidacos sy renirano, ao amin'ny Sierra de Cameros, Yanguas dia manana lova sarobidy tokoa.
Izy io dia mandrafitra azy lapan'ny, trano mimanda tamin'ny taonjato faha-XNUMX; ny vavahadin'ny renirano sy ny Villa, sisa tavela amin'ny rindrina taloha, ary ny fiangonan'i San Lorenzo, mahagaga an'i Gothic tara. Fa koa ny fiangonan'i Santa Maria, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX; ny Lapan'ny tanàna ny XVIII; ny Tilikambon'i San Miguel ary ny tetezana medieval amin'ny reniranon'i Cidacos.
Vavahady renirano Yanguas
Etsy ankilany, any amin'ny manodidina an'i Yanguas dia misy faritra paleontolojika mahaliana toy ny an'ny Ilay Muga, izay ahitanao petra-bola dian-tongotra dinôzôro.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Soria. Fa misy maro hafa toa Magana, miaraka amin'ny lapan'i Nava del Marqués sy ny fiangonany Gothic ao San Martín de Tours; Oncala, izay fiangonany ao San Millán dia misy fitambaran-tsarimihetsika Flemish folo, na Vinuesa, miaraka amin'ny tetezana romana sy ny mahavariana azy Lagoon mainty. Tsy mahatsiaro te hitety ity faritany Espaniola mahafinaritra ity ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Tanànan'ny Soria
Inona no hitsidika an'i Toledo